I-Orbi ye-Cable Router ye-CBR40 Incwadana yomsebenzisi-yeeNcwadi +
Incwadana yomsebenzisi we-Orbi Cable Router CBR40
Kuthunyelwe nguukugqwesa January 13, 2021 January 21, 2021 Ushiye uluvo Kwincwadi yomsebenzisi ye-Orbi Cable Router CBR40
Ikhaya » NETGEAR » Incwadana yomsebenzisi we-Orbi Cable Router CBR40
1 Umzekelo weOrbi Cable Router CBR40
1.1 Cwangcisa uze usebenze nge-NETGEAR Orbi App
1.2 Cwangcisa i-Orbi yakho ye-Cable Router kunye neSatellite
1.3 Qalisa inkonzo yakho ye-Intanethi
1.5 Isiqulatho sePakethe
1.6 Isishwankathelo se-Orbi Cable Router
1.7 Isishwankathelo seOrbi ngeSathelayithi
1.8 Ii-LED ze-Orbi ze-Cable Router
2 Iincwadana ezinxulumene noko:
Umzekelo weOrbi Cable Router CBR40
Cwangcisa uze usebenze nge-NETGEAR Orbi App
Setha i-Orbi cable router yakho kunye nesathelayithi kwaye wenze isebenze inkonzo yakho ye-Intanethi nge-NETGEAR Orbi app.
Ukuba awufuni ukusebenzisa i-app ye-NETGEAR Orbi, setha i-cable router yakho kunye nesathelayithi usebenzisa imiyalelo kwi Cwangcisa i-Orbi yakho ye-Cable Router kunye neSatellite, kwaye isebenze inkonzo yakho ye-Intanethi usebenzisa imiyalelo kwi Qalisa inkonzo yakho ye-Intanethi.
Skena ikhowudi ye-QR okanye ukhangele i-NETGEAR Orbi kwiVenkile yeApple yeApple okanye kwiGoogle Play Store.
Khuphela kwaye uvule usetyenziso lwe-NETGEAR Orbi kwisixhobo sakho esiphathwayo kwaye ulandele inyathelo.
Cwangcisa i-Orbi yakho ye-Cable Router kunye neSatellite
1. Qokelela ulwazi lweakhawunti yakho yeXfinity.
Qokelela ulwazi lweakhawunti yakho yeXfinity, njengeakhawunti yakho inombolo yefowuni, igama lomsebenzisi, ipassword kunye nenombolo yeakhawunti.
2. Cima kwaye unqamule iimodem ezikhoyo kunye neendlela.
Ukuba ubeka endaweni imodem eqhagamshelwe ngoku ekhayeni lakho, vula imodem kwaye ufake i-cable cable entsha kwivenkile enye.
3. Qhagamshela intambo ye-coaxial.
Sebenzisa intambo ye-coaxial ukuqhagamshela isinxibelelanisi se-cable coax kwi-cable cable kwi-wall wall outlet.
4. Qhagamshela iadaptha yamandla.
Qhagamshela iadaptha yamandla kwi-cable router kwaye ufake iplagi yombane kwindawo yokuphuma yombane.
Inkqubo yokuqalisa ithatha malunga nomzuzu omnye. Xa igqityiwe, amandla e-LED akhanya luhlaza okwesibhakabhaka.
5. Lindela i-Intanethi ekwi-Intanethi ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Le nkqubo inokuthatha ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-10.
Phawula: Xa izibane ze-Intanethi ezikwi-Intanethi, i-router yakho yekhebula ingekaxhunyiwe kwi-Intanethi okwangoku. Kuya kufuneka wenze i-router yakho yekhebula kunye neXfinity.
6. Qhagamshela ikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo kwi-Orbi cable router nge-Ethernet okanye kwi-WiFi:
I-Ethernet. Sebenzisa intambo ye-Ethernet ukuqhagamshela ikhompyuter kwi-router.
WiFi. Sebenzisa igama lenethiwekhi ye-WiFi (SSID) kunye negama lokugqitha kwileyibhile ye-cable router ukudibanisa.
7. Ngena kwi-router ye-cable kwaye utshintshe iphasiwedi yomlawuli.
KUBALULEKILE: Sincoma ukuba utshintshe iphasiwedi yomlawuli ukukhusela i-router yakho yekhebula.
Qalisa isikhangeli sewebhu kwaye ungene orbilogin.net or 192.168.1.1 kummandla wedilesi yesikhangeli sewebhu.
Ukuba iwindow yokungena ivula, ngena admin igama lomsebenzisi lomlawuli kunye inombolo yokuvula iphasiwedi yomlawuli.
Yiya kwicandelo le-ADVANCED kwaye utshintshe iphasiwedi emiselweyo kwaye usete imibuzo yokhuseleko.
8. Yenza inkonzo yakho ye-Intanethi isebenze.
Ngolwazi malunga nendlela yokuvula inkonzo yakho ye-Intanethi, jonga Qalisa inkonzo yakho ye-Intanethi.
9. Beka i-Orbi satellite yakho.
Beka isathelayithi yakho kuluhlu lwe-WiFi yakho kunye namandla kuyo.
Isathelayithi izama ukuvumelanisa nomzila wakho.
10. Lindela isathelayithi ungqamaniso lomgaqo wakho.
Isangqa sesangqa sesibane se-LED sikhanya mhlophe ngelixa i-satellite izama ukuvumelanisa kunye nomzila wentambo.
Ke iringi ye-LED ikhanyisa omnye wale mibala ilandelayo malunga nemizuzu emithathu emva koko ucime:
Phawula: Ukuba iringi ye-LED isakhanyisile i-magenta emva komzuzu omnye, cinezela sync iqhosha kwi-cable cable kunye ne-satellite. Ukuba isathelayithi iyangqinelana kunye nomzila wentambo, iringi yesatellite isibane se-LED sikhanya mhlophe. Iringi ye-LED emva koko ikhanyise ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukubonisa unxibelelwano oluhle kwaye icime.
Qalisa inkonzo yakho ye-Intanethi
Phambi kokuba uqalise inkqubo yokuvula ngokwakho, qokelela olu lwazi lulandelayo:
Ulwazi lweakhawunti yakho yomboneleli ngenkonzo ye-Intanethi (ISP)
Inombolo yemodeli ye-Cable router, eyi-CBR40.
Inombolo ye-Cable router serial
Idilesi ye-Mac cable
Inombolo yesiriyeli yekhebula yakho yedilesi kunye nedilesi ye-MAC zikwiileyibhile zendlela yentambo.
Olu luhlu lulandelayo uluhlu lweenkcukacha zonxibelelwano ze-ISP ezixhasa i-cable router yakho.
Phawula: Ulwazi loqhakamshelwano lwe-ISP lunokutshintsha. Unokufumana ulwazi lokunxibelelana kwingxelo yakho yenyanga ye-Intanethi yokuhlawula.
Ndwendwela iwebhusayithi yakho ye-ISP kwaye ulandele imiyalelo ekwiskrini ukuze isebenze kwi-Intanethi.
Ukufumanisa isantya esichanekileyo se-Intanethi, ndwendwela iwebhusayithi ye-ISP yokuvavanya isantya okanye wenze uvavanyo lwesantya.
Enkosi ngokuthenga le mveliso yeNETGEAR. Ungandwendwela www.netgear.com/support ukubhalisa imveliso yakho, fumana uncedo, ukufikelela kukhuphelo lwamva nje kunye neencwadana zomsebenzisi, kwaye ujoyine uluntu lwethu. Sincoma ukuba usebenzise kuphela izixhobo zenkxaso zeNETGEAR ezisemthethweni.
Ii-routers zekhebula zabathengi zisenokungahambelani nabanikezeli beenkonzo ezithile ze-Intanethi (ISPs). Jonga nge-ISP yakho ukuqinisekisa ukuba le NETGEAR cable cable ivunyelwe kwinethiwekhi yakho ye-ISP.
Si cevelisoit est vendu au Canada, vous pouvez accéder à ce uxwebhu en français canadien ku http://downloadcenter.netgear.com/other/.
(Ukuba le mveliso ithengiswa eCanada, ungafikelela kolu xwebhu ngesiFrentshi saseCanada apha http://downloadcenter.netgear.com/other/.)
Kwisibhengezo sangoku se-EU sokuvumelana, ndwendwela http://kb.netgear.com/11621.
Ngolwazi lokuthobela imigaqo, ndwendwela http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Jonga uxwebhu lokuthotyelwa komthetho ngaphambi kokudibanisa unikezelo lwamandla.
Isishwankathelo se-Orbi Cable Router
Isishwankathelo seOrbi ngeSathelayithi
Ii-LED ze-Orbi ze-Cable Router
Incwadana yomsebenzisi we-Orbi ye-Orbi CBR40- Kulungiselelwe iPDF
Incwadana yomsebenzisi we-Orbi ye-Orbi CBR40- I-PDF yoqobo
Iincwadana ezinxulumene noko:
I-Orbi ye-Cable Modem Router ye-CBR750 yomSebenzi womsebenzisi Imodeli yokuKhokela okuKhawulezayo ye-CBR750 Cwangcisa kwaye usebenze usebenzisa ...
I-Orbi WiFi 6 DOCSIS 3.1 Iphepha leModem yeDatha yeeDatha ...
Inkqubo yeOrbi yeWiFi eseKhaya eyakhelwe kwiModyuli yeeCable CBK40 yoMsebenzisi Inkqubo yeOrbi yeWiFi eseKhaya eyakhelwe kwimodem yeCable CBK40 ...
Incwadana yemodeli yeWiFi ye-Cable Modem C3700 I-Wifi ye-Cable Modem Router ye-C3700 yoMsebenzisi-eyenzelwe iPD ...
Incwadana yemodeli yeWiFi ye-Cable Modem C3000 I-Wifi ye-Cable Modem Router ye-C3000 yoMsebenzisi-eyenzelwe iPD ...
I-C3700 ye-WiFi ye-Cable Modem Router yomsebenzisi Isikhokelo sokufaka i-C3700 ye-WiFi ye-Cable Modem Router Package Contents Connect ...
Kuthunyelwe nguukugqwesa January 13, 2021 January 21, 2021 exhonyiweyoNETGEARtags: I-CBR40, NETGEAR, Intambo yeOrbi Cable
I-Whirlpool W10648064A Incwadana yoMsebenzisi yokuPheka kweGesi
I-AC1200 ye-WiFi ye-Cable Modem Router ye-C6220 yoMsebenzisi
I-HEADRUSH Isithethi Esikhulu Somlomo Incwadi ye-HRSP-5020 yokuFundisa
Uluhlu lwezixhobo zeTekhnoloji ekhawulezayo yeQualcomm
I-HamiltonBuhl ye-VR yoMlawuli oyiNtloko yeVRRC yoLwazi loMsebenzisi
I-SentrySafe Fire-Safe Combination / Keypad Manual
Imiyalelo yokuLungiselela iiKhowudi eSentrySafe
UCarol Vinson on Isikhokelo soMsebenzisi weSakhelo seFoto
USimon Chipman on I-Skullcandy yathetha incwadi yomsebenzisi
UNonja Dickey on I-Onn Earbuds 100005529 Incwadi yomsebenzisi [ONN5529. KWI-5530]
SOLDIERX on I-Mpow M12 yeNyaniso yeNdlebe engenazingcingo yoMsebenzisi BH463A
Umlotha on Isikhokelo soLawulo loKhuseleko lweLG LG
Iincwadana +, Iqhayiya inikwe amandla yi WordPress.